Yese webhusaiti, ma routers, & Laptop vane iyo IP kero 192.168.8.10. Ndiwo makomputa anozivikanwa zvega nega pamambure kana pane network. Kazhinji, yako router inopa imwe kune iyo Laptop mune yemuno network. Inoita sei kuti ive nechokwadi chekuti IP kero paPC yemuno haisi iyo yakafanana pamambure? Zvekushandisa pachezvako pane chinyorwa chenhamba chakaparadzaniswa (bhizinesi, nzvimbo yebasa, imba yekumba, nezvimwewo.
IP Address 192.168.8.10 iri yakavanzika IP kero. Yakavanzika IP kero mukati inoshandiswa seLAN yemuno nharaunda network (LAN) & isina kuratidzwa pamambure. Yakasarudzika IP kero inotsanangurwa muRFC (IPv6) 4193 kana RFC (IPv4) 1918.
192.168.8.10 yakakosha IP yakachengetedzwa yekuwanazve ma routers admin koni. Izvi pamwe neakasiyana maIPs semuenzaniso 192.168.8.200, 192.168.8.1, 192.168.0.35, nezvimwe zvinogamuchirwa pasi rese maitiro eiri router IPs. Mune zvinyorwa zvinonzi "Default IP Gateway". Haisi yega yega mairauta akafanana. Pamusoro pezvo, pane dzimwe nzira pakati pemamodeli akati wandei akafanana nemafemu. Aya mabhizinesi sekupinda IP anoshandisa 192.168.8.10.
Iyo 192.168.8.10 IP kero mune yakateedzana 192.168.8.1 kusvika 192.168.8.255. Iyi kero chiyero chinoshandiswa mumatunhu enzvimbo router ichaparadzaniswa kune ese madhivha (malaptop, ini pad, Kumba Komputa, Nhare mbozha, nezvimwewo) zvemakanika epamba network.
The https://192.168.8.10 IP kero inosanganisirwa neInternet Inotumidzwa manhamba Chiremera sechikamu chakatemerwa 192.168.8.0 / 24 network. IP kero munzvimbo yega haibvumirwe kumasangano mashoma & chero munhu anogona kushandisa IP kero asina kubvumidzwa nepamhepo Internet rejista hofisi yakanyorwa neRFC 1918, kusiyana neakagovaniswa IP kero.
IP 192.168.8.1 kusvika 192.168.8.255 renji kwese kwese IP 192.168.8.10 iri chikamu cheyakavanzika IP renji inovimbisa zvimiro zvakagara zvatemwa neRFC 1918. Kero dzemaenzaniso 192.168.8.10 hadziwanzobvumirwi muInternet yakagovaniswa. Kana iyo yakavanzika network inoda kubatanidza kuburikidza neinternet, inofanirwa kushandisa senzira yekupinda kana kutsiva server.
Nei kero yakaita se192.168.8.10 zvakajairwa?
Sezvakarairwa, iyo IP kero 192.168.8.10 chikamu cheakasarudzika C kirasi network. Kurongeka kwenzvimbo dzakadai 192.168.0.0 kusvika 192.168.255.255. Izvi zvinoita kuti zvive zvishoma zvinogoneka IP kero 65,535. Izvi zvakawedzeredzwa zvinowanzo shandiswa pane zvakavanzika network sema rauta akasiyana siyana anotarisirwa ne 192.168.1.1, 192.168.8.1, kana 192.168.0.1, seye default kero.
Kana uchibatanidza kunetiweki nefoni, kana malaptop, mapiritsi, iwe unowana IP kero semuenzaniso 192.168.8.10 mune ino mamiriro.
Kuongorora iyo router
Ose ma routers anotaurika nebrowser. Record https://192.168.8.10 mubrowser kana iyo IP kero router iri 192.168.8.10. Iwe unozoona rekunze peji rekutanga. Mazhinji anogara achishandiswa PWs & mazita ari: "1234" admin kana "nil". Ndokumbirawo muve nechokwadi nekuda kweiyo router zvinyorwa.
Kana iyo 192.168.8.10 isiri iyo IP router, unogona kutora iyo IP router neIconconfig raira. Kuwana yako admin webhu-peji, iwe unogona kushandisa iyo admin peji rekutanga nekunyora mukati kero munda wewebhu browser uye unogona kusimbisa login passkey.